Semalt Icebisa ukuba isebenzise idatha yoHlelo lweMigangatho yokuCofa ngakumbi
NgoSeptemba wango-2019, uGoogle wakhupha umba kwinjini yokukhangela ekhethekileyo iseti yedatha. Isinika izinto ezimbini: isibonelelo esichaziweyo sedatha ebalulekileyo kwabo bafuna ukuqinisa amabango abo kunye nelinye iqhinga lokusebenzisa injini yokukhangela. Nokuba yintoni na ekujolise kuyo, sinesisombululo kuwe.
Yintoni uLwazi oluHleliweyo?
Idatha elungisiweyo yifomathi ekhethwa nguGoogle xa kukhangelwa iidatha. Uhlobo lombutho wedatabase luku schema.org , apho ungahamba khona ngokusebenzisa uluhlu lweeschemas ukufumana isitayile sedatha ukulingana nodidi lwakho. Ukuba oku kubonakala kusiba nzima, siya kungena kwezinye iinkcukacha kamva. Okokuqala, apha ngezantsi luluhlu lwesigama esiya kube sisisebenzisa.
Ischema-Uhlobo lodidi lweepropati eziguqukayo kuxhomekeka kwisihloko ekuxoxwe ngaso.
Oku kubandakanya indawo yokugcina izilwanyana, imisebenzi yoyilo, iimveliso kunye neendawo.
Dataset-Ulwazi oluhambelana nes schema.
Imisebenzi yokuyila iya kuba nombhali, umhleli kunye nezinto ezingafunwayo.
I-Microdata-Le zii tags ezisetyenziswa kwi-HTML ukuchaza uhlobo lweedatha.
"Umbhali" ngokwayo yiphawu elinokubakho
Ukuphawula-xa ufaka i-microdata kwidathabheyisi yakho
I-ITEMSCOPE-Ithegi ye-HTML yokufaka ischema
I-ITEMTYPE-Ithegi ye-HTML yokuchaza uhlobo lwe-schema
I-ITEMPROP-Ithegi ye-HTML yokuchaza ipropathi yento leyo.
Umbali = "umbhali"
Ukuba awazi nto nge HTML, qonda ukuba iinkcazo ezintathu zokugqibela ziphakathi kwekhowudi. Uya kubabona rhoqo xa ujonga idatha kunye neeschemas. Awudingi ukuqonda i-HTML ukuze uqonde le posi.
Ukuba uyayiqonda HTML, uyakuzibona njengesiseko sokusebenzisa ischema kwikhowudi yakho. I-Schemas iya kukuvumela ukuba uququzelele umxholo wakho ukuba uqatshelwe ziinjini zokukhangela zikaGoogle njengedatha. Esi sicelo se-schema siya kuzisa i-traffic kwiwebhusayithi yakho ukuba iphathwe ngokuchanekileyo.
Ndiyisebenzisa njani le datha kwiWebhusayithi yam?
Siza kubuyela ekusebenziseni umxholo wakho njengedatha kamva kwibhlog. Okokuqala, siza kusebenzisa le injini yokukhangela njengovimba oza kuwusebenzisa kwiwebhusayithi yakho. Kulula kakhulu ukuphindisela idatha esele ikho kunokudala idatha eyahlukileyo.
Kunini apho ndinokuthi ndinexhala malunga nelungelo lokushicilela?
Ukuba uyazikhumbula iintsuku zakho zasekholejini, ukucaphula imithombo yakho yeyona nto iphambili ekusebenziseni idatha ukuphucula amanqaku akho. Xa kuziwa kwimveliso yokuqulatha, uninzi lwemithetho efanayo luya kusebenza okoko ubanike ityala. Umzekelo, andikwazanga ukukuxelela ukuba ndibhale ibali lasekuqaleni eliqheleke ngokufihlakeleyo kwifoto yebali elithethwe nguSteven King.
Uphendlo lukaGoogle kwi-Dataset lubandakanya into yokukhangela emisela umda ngokusetyenziswa kwezorhwebo kunye nokusetyenziswa okungengokwentengiso. Ukuba injongo yakho kukubhala ibhlog ehambelana nophawu lokwenza intengiso, eli candelo liya kuyimfuneko kuwe. Ukuba awuqinisekanga, zive ukhululekile ukufikelela kwibhlogger okanye inkampani enxulumene nayo. Bayakuxabisa ukungena kwakho, kwaye kunokukuvulela elinye ithuba.
Yintoni endifanele ndiyikhangele kuGoogle Dataset?
Yintoni ekufuneka uyikhangele iya kuxhomekeka kwi-niche yakho. Masithi uzama ukwenza ingongoma kwii-CEO ezingenzi nzuzo. Unokucinga ukuba bahlawulwa kakhulu. Ke ujonga umsebenzi wesisa uneziphumo ezincinci. Kodwa ukusebenzisa "ukujonga isihloko" kukunceda unciphise. Iinkcukacha zikumfanekiso ongezantsi.
Masithi ufuna iitafile ezinoluhlu lwezinto ezinceda abantu abasebenza e-UK. Unako kwakhona ukuhlela idatha ngokwefomathi. Kule meko, ukhetha ukhetho lwefomathi kwaye ukhethe "itafile." Kule, qaphela ngakumbi ukusetyenziswa apho oku kusebenza khona.
Ngaba zikhona ezinye izibonelelo xa usebenzisa uPhendlo lweGoogle Dataset?
Abantu sigcine iso Google blog kube ukufikelela ikuncede kulwazi. Unokulandela kunye nebhlog kaSemalt , oya kuba nokujonga ngamehlo ukuba iyitshintsha njani imbonakalo ye -SEO. UGoogle une- FAQ .
Ngelixa iGoogle izise into enomdla ekusetyenzisweni kwenjini yayo yokukhangela, injongo kaSemalt ikukuba kukungena phezulu kolu lwimi. Kwicandelo elilandelayo, siza kuhamba ngokusebenzisa indlela yokufaka idatha yakho kule injini yokukhangela. Ukusetyenziswa kwale datha ehlelweyo lithuba elitsha kwabo bafuna ukwandisa ukubonakala kwabo kwaye bafumane uninzi lokucofa.
Ungawaphawula njani amaphepha akho e-Dataset
Ukwenza izinto zibe lula, siza kubonelela ngenkqubela-phambili ngenyathelo lokukunceda ukumakisha amaphepha akho edata. Siza kukubonelela ngezixhobo ezimbalwa eziza kukunceda kwindlela yakho. Apha ngasezantsi luluhlu oluchaza into esiya kuba siyigqitha.
Chaza isihloko sakho (isihloko).
Qaphela into efaneleke njengedatha.
Uphando oluchanekileyo kunye nolunolwazi olwahlukileyo.
Veza le HTML efunekayo.
Ukuchaza umxholo wakho
Ukuchaza i-schema yakho linyathelo lokuqala lokuvelisa nayiphi na iseti yedatha. Uluhlu lwe-Schemas lukwi- schema.org. Kunokubakho iphepha elinye kwisahlulo esinye. Ke awuzukufaka iphepha langaphambili kwi-schema, uya kubandakanya kuphela iposti yebhlogi.
Ngale nto, siya kuba sisebenzisa i-butchery yendawo. Xa usenza uphando kwiwebhusayithi, uthathe isigqibo sokuba ungathanda ukuba kwinqanaba njengendawo kwiphepha lakho ledatha. Umzekelo, masithi uqesha umntu ukuba aqokelele ulwazi ngeendleko zenyama yenkomo kwidolophu yakho. Ngokwenza uphando, uya kuba nakho ukusebenzisa le datha kubantu abafuna le ndawo yakho.
Oku kundinceda njani?
Le nzame iya kwandisa ukugcwala kwiwebhu kwaye inike iwebhusayithi yakho ukuba ikhuthaze njengomthombo wolwazi othembekileyo. Unokusebenzisa olu lwazi kwizibhengezo ezizayo. Ungatsho ukuba unayo eyona ethembisa kakhulu inyama yenkomo xa ithelekiswa neebhloko ezili-100 ezilandelayo kwisixeko sakho. Qiniseka ukuba uyabahlonipha abanye kwinkqubo yokusebenzisa le ngcaciso.
Yilumkele into eyiLungelo njengeDatas
Eyona ndlela umntu anokufumana ngayo malunga nokufanelekile njengedatha kukukhangela. I-FAQ yophuhliso lwe-Google ikwanemizekelo embalwa , kodwa siya kufuna ukwanda kolu luhlu. Omnye umzekelo endifuna ukugxila kuwo "nayiphina into ebonakala njengedathabheyisi." Isixhobo sokukhangela sikaGoogle sinamandla ngokumangalisayo njengoko unokwazi ukuphatha iidatha.
Ngokuthatha umzekelo wethu wangaphambili, sinako ukuhlela amaxabiso "eenkomo ezilungileyo kakhulu esixekweni" esivelise kuwo kwaye siwusebenzise kwitafile ebalaseleyo, kwitafile yewebhusayithi eyakhiwe, a .pdf, a .xml, .docx, kunye bambalwa abanye abanokufundwa yi-google's AI. Unokusebenzisa umfanekiso ofanelekileyo. Iigrafu zebar kunye neegrafu zomgca zombini zisingathwa ngokulula ngu-Excel.
Iidatata ziya kuthakazelela ulwazi oluza ngokucocekileyo nangobungcali. Ukuba iwebhusayithi yakho yenziwe nkulu ukuvelisa olu luhlu lwetafile kunye ne-datha, uGoogle uya kusebenzisa olo lwazi ukuphucula uphando. Kwakhona iindwendwe zinokuba neendlela ezahlukeneyo zokufunda. Ukuvelisa imixholo yasimahla ngeendlela ezahlukeneyo zosasazo kuya kunceda umfundi aqonde inqaku lakho.
Ukuphanda ngeNgcaciso neDatha efanelekileyo
Isitshixo se-SEO kunye needatha zivelisa into ekhethekileyo egubungela amagama aphambili kwi-niche ethile. Oku kuyasebenza xa kufikwa kwi-schemas kunye needatha. Ngokwenza into enefomathi eqhelekileyo, yenza izinto zibe lula ukuba abafundi bazisebenzise. Idatha eyahlukileyo yinto eya kubagcina bejikeleze.
Kwivenkile yokubhunga, kuya kufuneka ukuba afowunele okanye aye kwiiwebhusayithi ezimbalwa ukubonelela ngedatha. Idatha kufuneka ilinganiswe kwaye ifunyanwe. Kule meko, kulula njengokujonga ngapha nangapha nokufowuna xa kufuneka. Ukuba ufuna izimvo zabantu zeshishini lakho, babanike isikali ukusuka kwelinye ukuya ezintlanu. Unokusebenzisa uphononongo lukawonke wonke kuGoogle, kodwa idata akusoloko kulula ukuyiqokelela.
Olu lwazi lukunceda ukuba ugcwalise idatabase yakho. Nangona kunjalo, ezinye iindlela zokusebenza zibandakanya ukuphuculwa kweshishini kunye nokwazisa ngemicimbi. Ukuba wenza uphononongo, ufumanisa ukuba awunayo indawo, lithuba lokuphucula. Kuya kufuneka uyitshintshe isihloko sakho ukuba unqwenela ukuzalisa idathabheyisi.
Veza i-HTML efunekayo
Ukuvelisa i-HTML yinkqubo ebandakanyekayo kubuchwepheshe enokuthatha ixesha elininzi. Iibhulethi esizichazile apha ngasentla zinokudideka ukuba awunamava nge-HTML okanye ngolwimi lwenkqubo. Unganqwenela ukuqesha italente entsha ukuze ikuncede.
Italente efana nale ikwiiwebhusayithi ezisebenza ngokukhululekileyo. Imizekelo eyaziwayo yoku ingabandakanya iToptal, Upwork, kunye ne-Freelancer.com. Zama ukufumana umntu onamava endle ngaphambili. Ukuba abakakhange babeke uphawu kwishishini ledatha ngaphambili, basenokungayazi into abayenzayo. Ukuba bayazi into abayenzayo, phonononga i-ITEMPROP yakho ye- schema ekujolise kuyo ukuze ukwazi ukuyijonga kwakhona i-HTML ngolwazi oluthile.
Uninzi lwee-freelancers ziya kuzisa umbono omtsha kwinkampani yakho. Qiniseka ukuba ubambelele kumbono wenkampani yakho. Ngapha koko, ii-freelancers can mess ne-SEO yakho. Qiniseka ukuba ubonana noSemalt ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nento esiyicebisayo malunga nokusebenzisa idata kwiwebhusayithi yakho.
Ngaba i-Dataset Worth ibeka iphepha lam?
Impendulo yalo mbuzo ixhomekeke kwinjongo yakho iyonke. Ukwenza iwebhusayithi, okanye ibhlog, esekwe kwimihlaba yolwazi kunye namanqaku aneenkcukacha ezikhethekileyo kuthatha umsebenzi omkhulu. Amashishini amancinci anokuphelisa utyalomali olukhulu ngaphezulu kwezicwangciso zabo. Inqanaba lexesha, umgudu, kunye nemali enokuthatha ixesha likhulu.
Nangona kunjalo, ukudala isiseko solwazi esijikeleze ishishini lakho esineekhonkco rhoqo kwiwebhusayithi yakho kubalulekile kwisicwangciso sobhlogi esomeleleyo. Ukufaka le lwazi njenge dathabheyisi kukhulisa ukuthembeka kwakho. Ugcino lweDatabase lukaGoogle likhule izinga lokuchatshazelwa kwamaqela ophando lwezifundo ngenxa yoku. Ukubeka umxholo wakho ecaleni kwale nto kukunika amandla kwangoko.
Isifundo seMeko yeNjini yeDataset kaGoogle
Usenokuba ucinga ukuba oku kwakhelwe ngcono kumaqela ezemfundo nakwiiwebhusayithi ezisekeleze izibalo. Nangona kunjalo, inkampani yaseJapan egama linguRakuten isebenzise le nkonzo ukukhuthaza iRakuten Recipies. Ukusetyenziswa kwedatha elungelelanisiweyo kwandise ukugcwala kwewebhu ngeepesenti ezingama-270.
Esi sicwangciso asisoloko sikhokelela ekufumaneni ngokwakho kwi-injini yokukhangela yedatha. Ngamanye amaxesha kukukhokelela ukuba ube phakathi kweencwadana eziqhotyoshelweyo. Iziqwengana ezibonisiweyo zizinto esiya kuzixoxa ngenkcukacha kwenye ibhlog.
Idatha eQokelelweyo iza kundinceda njani ukuba ndiye kuPhezulu kuGoogle?
Kwiinkampani ezininzi, idatha elungelelanisiweyo yindlela yokuphucula i-SEO yakho ngokusebenzisa iidatha esele zikho kunye nefomathi. Kwabanye abanokuphanda isixa esikhulu sedatha, lithuba. Ngokwenza uphando kunye nokwazi ukuba iwebhusayithi yakho ingena njani kule web, uzinika elona thuba. Ngengxoxo noSemalt, siya kubona ukuba iwebhusayithi yakho iya kulungeleka ukusebenzisa oku ukufikelela phezulu kuGoogle.